दामोदर पौडेल मानिस पुँजीवादी र साम्यवादी थिएनन् केवल असल र खराब थिए। यो भनाइ स्टालिन पुत्री स्व. स्वेतलानाको हो। तर, अहिले खराब र असल पनि वादको आधारमा हुने गरेको
डा. डीआर उपाध्याय आगामी २ असोजमा प्रदेश नं. २ को निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनको तयारीका लागि मधेस केन्द्रित दलहरु त्यति सक्रियता देखाएर हिँडेको देखिँदैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको
रमेश घिमिरे देशभर यतिखेर बाढी, पहिरो, भूक्षय, नदीकटानजस्ता विविध प्राकृतिक प्रकोपका आततायी घटनाहरुबाट लाखौँ नेपाली आक्रान्त भइरहेका छन्। ती घटनामा हालसम्म १२० जनाभन्दा बढी नागरिकको अनाहकमा ज्यान गुमेको छ।
बालकृष्ण मैनाली यसपालिको वर्षादमा आएको बाढी–पहिरोमा परी ज्यान ज्यानेको संख्या सय पुग्न आँटिसक्यो। यस प्राकृतिक प्रकोपले थुप्रैलाई विस्थापित गरायो। हुन त प्राकृतिक विनाशले सीमा निर्धारण गरेको हुँदैन, तथापि विविध प्रक्रिया
श्रीमन्नारायण हाम्रो दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको ७१ औं दिवस मनाइरहेको छ। अनेकौं आरोह–अवरोहका बाबजुद उसको स्वतन्त्र लोकतन्त्र जीवन्त एवं प्रगति तथा विकासको बाटोमा निरन्तररूपमा अग्रसर छ।
कपिल काफ्ले आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले सरकार र नागरिक समाजलाई तताएको देखिएन। कतिपयले टिप्पणी गरे, ‘सरकार डा. केसीसँग दिक्क भैसक्यो, उसलाई लागेको हुनसक्छ– मरिदिए टन्टै साफ ⁄’